ब्लग के हो, ब्लगबाट कसरी पैसा कमाउने ? - Dainik Nepal
ब्लग के हो, ब्लगबाट कसरी पैसा कमाउने ?
कमल धिताल २०७७ पुष ४ गते १४:३५
वास्तवमा कागज पानामा अनलाइन लेख्ने डायरी एउटा ब्लग हो जसमा हाम्रो समाजका गतिविधिहरू र विचारहरू र विचार व्यक्त हुन्छन्।
जुन इन्टरनेटमा विश्वका विभिन्न भागहरू मार्फत देखा पर्दछ, जहाँ सल्लाह र प्रतिक्रिया विश्वका सबै ठाउँबाट साझा गर्न सकिन्छ। यसैले, त्यहाँ वेब माध्यममा एक डायरी लेखिएको छ, यसलाई वेब-ब्लग भनिन्छ, जुन छोटो ब्लग हो ।
सबै चीज परिवर्तन हुँदैछ, समयको चक्रमा सबै परिवर्तन हुँदैछ। इन्टरनेटमा पनि यही लागू हुन्छ। प्रारम्भिक पश्चिमी देशहरूमा बढ्दो परिष्कृत इन्टर्नेट टेक्नोलोजी र द्रुत अनलाइन व्यापारका कारण व्यवसायको प्रबर्द्धनका लागि विभिन्न वेबसाइट र ब्लगहरू सिर्जना गरिएका छन् र विभिन्न अनलाइन विज्ञापन एजेन्सीहरू र अनलाइन रोजगार एजेन्सीहरूको स्थापना भएको छ।
व्लग कसरी बनाउने?
पहिला तपाईं निशुल्क ब्लग बनाउन यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।
त्यहाँ तपाईंले क्रिएट याेर ब्लग देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।
अब आफ्नो ब्लगको नाम राख्नुहोस्।
नाम राखिसकेपछी आफुलाई मनपर्ने टेम्प्लेट छान्नुहोस् ।
अहिले मर्कन्टाइल .np दर्ता नि:शुल्क रुपमा गर्ने हुँदा आफ्नो नाम को डोमेनमा पनि यहाँले ब्लग बनाउन सक्नु हुन्छ । मर्कन्टाइल .np दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जस्तै मैले यो मेरो ब्लगब्लगर साईटमा बनाएको हो । जसलाई मैले मर्कन्टाइल .np दर्ता गरेर आफ्नो नामको डोमनमा यसलाई ढालेको छु ।तपाईंले पनि सोही अनुरुप आफ्नो डोमन लिन सक्नु हुन्छ।
अब वर्डप्रेसको लागी हो भने तपाईंलाई केहि मात्रमाएच.टि.एम.एल जानकारी हुनु जरुरी छ । यदी तपाईंलाईएच.टि.एम.एल जान्कारी छैन भने पहिला निशुल्क वर्डप्रेसडट कममा गएर ब्लग बनाउन सक्नु हुन्छ जुन अतन्त सजिलो छ ।
यो ब्लग वर्डप्रेसको साईटमा बनाएको हो जुन यहाँ ले हेरेर आफ्नो पनि सोही अनुसार बनाउन सक्नु हुन्छ ।
त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो चाहनाअनुसारको ब्लग डिजाइन गर्नुपर्छ र लेख्न थाल्नुपर्छ । कमाउनका निम्ति आफूले धेरै भन्दा धेरै पाठक भने तान्न सक्नुपर्छ ।
किनभने जति धेरै पाठकले आफ्नो लेख पढ्छन् उति नै पटक आफ्नो ब्लगमा आएको विज्ञापन हेर्छन् र आफूले उत्तिकै धेरै कमाउन सकिन्छ । त्यसैले पाठकले रुचाउने लेख लेख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसैले सकेसम्म अंग्रेजी वा अरू कुनै प्रचलित भाषा प्रयोग गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तर यदि नेपाली मा ब्लग लेख्नुहुन्छ भने फेसबुकले इन्टान्ट अर्टिकलले नेपाली भाषा स्विकार गर्छ ।
यदी अङ्रेजी भाषाको ब्लग हो भने एड्सेन्स एप्लाई गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
आफ्नो ब्लगको ठेगाना दिएर एप्लाई गर्नुहोस । यदी एड्सेन्स पोलिसी अनुसार तपाईंको ब्लग छ भने एड्सेन्स अप्रुभ भएको म्यासेज तपाईंको ईमेलमा केहि दिनमा पठाउछ । एड्सेन्स अप्रुभ भएन भनेएड्सेन्स पोलिसी अनुसार ढालेर पुन:एड्सेन्स एप्लाई गर्नु पर्छ ।
ब्लगगिङ सबन्धी अन्य जानकारी यो ब्लगमा गएर लिन सक्नु हुन्छ
मध्यरातमा अज्ञात सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा भक्तपुरको लोकन्थलीमा एक जनाको मृत्यु